DED လိုင်ဘေးရီးယား - သင့် DED ကုန်ဆုံးတဲ့အခါသင်အဘယ်သို့ပြုနိုင်?
High school student Gabrielle Gworlekaju, မှန်သော, with her mother, DED holder Magdelene Menyongaro, at home in Minneapolis. Photograph by Jared Goyette, courtesy of the Guardian.
DED Liberia – the US government has announced that Deferred Enforced Departure (DED) လိုင်ဘေးရီးယားကနေလူများအတွက်မတ်လသည်အထိတိုးချဲ့ထားပြီး 30, 2020. To find out more, သင်လုပ်နိုင်သည်:
အဆိုပါ Read memorandum
အဆိုပါ Read Federal Register Notice about work authorization
You will need to change your status or leave the United States by March 30, 2020. သင်တို့သည်အလျှင်းမပြုလျှင်, သငျသညျဖမ်းဆီးပြန်ပို့ခံရအန္တာရာယ်ပါလိမ့်မယ်.
have continuously resided in the United States since Oct. 1, 2002, နှင့်
USCIS Form I-9 Support: 888-464-4218 သို့မဟုတ်
If you want to travel outside the United States and return before the expiration date, you must file for advance parole. Advance parole gives you permission to leave the United States and return duringaspecified period. To request advance parole, you must file Form I-131, ခရီးသွားစာရွက်စာတမ်းများအတွက်လျှောက်လွှာ.
When your DED expires, သင့်ရဲ့ဥပဒေရေးရာ status ကိုပြန်ရှေ့မှာဘာကိုသွားပါလိမ့်မယ်. You can apply to change your status or you can leave the USA.
You must be eligible to apply. သင်တရားဝငျကွပါလျှင်အစိမ်းရောင်ကဒ်လျှောက်ထားများနှင့်အခြားလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းခြင်းငှါ. ဤရွေ့ကားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သင့်မိသားစုသို့မဟုတ်သင့်အလုပ်၏ဖြစ်နိုင်သည်. Find out if you are eligible and how to နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်လျှောက်ထား.
Some DED holders may be able to stay in the United States under special visas. လူကုန်ကူးမှု၏သားကောင်များအတွက်ပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာရှိပါတယ်, ထိခိုက်အိမ်ထောင်ဖက်, သည်အခြားပြစ်မှုများ၏ကလေးများသို့မဟုတ်မိဘများနှင့်သားကောင်များ.
သင်ရှာလိုရသည် ဒီနေရာမှာသင့်ရဲ့နိုင်ငံ၏အမေရိကန်သံရုံးက်ဘ်ဆိုက်. The embassy will post updates about DED on its home page.
သံရုံး၏လိပ်စာဖြစ်ပါသည် 5201 16th Street N.W., ဝါရှင်တန်ဒီစီ 20011.
ဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်ပါတယ်: (202) 723-0437.
သင့်ရဲ့ TPS သို့မဟုတ် DED ကုန်ဆုံးနေသည်?